ဆောင်းဦးပေါက်အလွမ်း | ဥက္ကာကိုကို
ဆောင်းဦးပေါက်အလွမ်း	Posted by oakkarkoko on December 21, 2009
Posted in: ကဗျာ.	Tagged: ဆောင်းကဗျာ.	Leaveacomment
ပေစောင်းစောင်းနဲ့ အေးတယ်။ ။
မှုခင်းရောင်စဉ်၊ မတ်၊ ၂၀၀၈။
← ဟင်းဖတ်မရတဲ့မျက်နှာ	အမှန်တရား၊ အလှတရား၊ ချစ်ခြင်းတရားတို့ စုဝေးရာ နေရာ တစ်နေရာ →	LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...